Farmaajo iyo Xulufadiisa oo kali ku ah Teendhada Xalane | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Farmaajo iyo Xulufadiisa oo kali ku ah Teendhada Xalane
Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamulada taabacsan ayaa hada ku sugan teendhada Afisiyooni ee lagu wado in uu ka furmo shirka looga hadlayo khilaafka doorashada.
Farmaajo , Rooble iyo Madaxda kale ee maamulada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kuwada sugan teendhada Afisiyooni ee loo qorsheeyay in uu ka furmo shirka DF iyo kuwa maamul goboleedyada.
Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaan wali tagin goobta uu shirka ka furmayo, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in ay ka biyo diidan yihiin ka qeyb galka shirkan la filayo in uu maanta furmo.
Wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa wada dadaalo ay ku xalinayaan khilaafka ka taagan furitaanka shirkan iyo sidii ay ugu qanci lahaayeen Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland in ay kasoo qeyb galaan shirka.
Shirka ka furmaya Teendhada Afisiyooni ayaa waxaa dadaal ku bixinaya qabsoomidiisa wakiilada beesha caalamka oo doonaya in Madaxda Soomaalida in ay heshiis ka gaaraan doorashada waqtigeeda ka dib dhacday.
Previous articleMadaxweynihii Hore ee Mareykanka Donal Trum oo laga dulqaadeyo Culeys Mudo uu la daala dhacayey
Next articleMadaxweyne Dani oo Shir isagu Yeeray Golaha Bad baadinta Qaranka
Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo goor dhawayd gaaray...
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in Ra’iisul wasaaraha Somaliya Maxamed Xuseen Rooble uu goor dhawayd magaalada Jowhar ee caasimada HirShabelle. Wafdiga...
Tirada dadka lagu dilay laba weerar oo ka dhacay barigaJamhuuriyadda Dimuquraadiga...
Baarlamanka Puntland Oo Ansixiyay Xisaab-Xirka Miisaaniyadda 2020
Ganaraal Odawaa yuusuf Raage oo beeniyay in uu is casilayo. kuna...
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen oo sheegay in qaxooti Soomaali ...
Boqolaal naxash ah oo ku daadatay xeebaha badda Talyaaniga kadib markii...
DOWLADA Somaliya ayaa faahisay Sababta looga joojiyay Dhaqaalihii Beesha Caalamka...